मुटु र रगतविहीन मेरिना :: Setopati
सजिलो हुने भएको भए दुनियाँमा हैकम चलाउने विश्वशक्तिका साम्राज्यहरू आज एउटा सानो कोरोना भाइरससँग किन रोइरहन्थे होलान्!
बाबुरामले २०६८ सालमा राष्ट्रिय पोशाकको सूचीबाट दौरा-सुरुवाल र साडी-चोलीलाई हटाइदिए। टाइसुटमा टोपी लगाएर क्लाउनजस्तो देखिँदा उनलाई गर्व लाग्छ। दौरा-सुरुवालमा सामन्तीपन गनाउँछ। बाँदरले जस्तो भत्काउन मात्र जानेकाले बनाउन के जानुन र! आफू नांगिएपछि मान्छेले अरुलाई पनि नग्याउन खोज्दो रहेछ। हुन त बाबुरामहरुको बारेमा धेरै कोट्याइरहन परेन। पत्रकार सुधीर शर्माले प्रयोगशालामा पूरै नालीबेली लेखिसकेका छन्।
एक जना साना भाइ सिकिज सात वर्षको उमेरमा क्यानाडा आएका रहेछन्। उनी पढन नजाने पनि नेपाली राम्रोसँग बोल्न जान्दा रहेनछन्। जति बोल्न सक्दा रहेछन्, त्यतिमा अङ्ग्रेजी नमिसाई बोल्दा रहेछन्। उनी नेपालीसँग कहिल्यै अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्दा रहेनछन्।
सिकिज नेपाल जाँदाको कथा सुनाउँथे। उनी १३ वर्षको उमेरमा नेपाल गएछन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच गराइसकेपछि निस्कने बेलामा अध्यागमनका कर्मचारीलाई उनले ‘धन्यवाद’ भनेछन्। तर, ती कर्मचारीले धन्यवादको प्रतिउत्तर दिएनछन्। बरु नबुझेजस्तो गरेर उल्टै हेरेछन्। उनलाई ‘अरे! नेपालमा धन्यवाद भनेको पनि बुझ्दा रहेनछन्’ भनेर अनौठो लागेछ। उनी भन्थे, ‘अङ्ग्रेजीमा थ्यांक्यु र वेलकम भने मात्र बुझ्दा रहेछन्। त्यही कुरा नेपालीमा भन्यो भने नेपालमा त ट्वाल्ल परेर हेर्दा पो रहेछन्।’
सगरमाथा रोएको दिन